Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ (171596-29-5) ≥99.5% | AASraw mmekọahụ ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
3.36 si 5 dabere na 11 ahịa Fim
SKU: 171596-29-5. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
Tadalafil uzuzu, ihe akwara nke tadalafil, bu uzuzu uzuzu, ana emekarị ka o jiri ya mee tadalafil. Tadalafil, ọgwụ a na-akpọ / Cialis, bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara dị ka PDE-5.
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke (UWUMX-171596-29)), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Raw Tadalafil uzuzu (Cialis ntụ ntụ) video
Raw tadalafil (Cialis) ntụ ntụ isi agwa
aha: Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C22H19N3O4
Ọbara arọ: 389.4
Nchekwa Nche: 20ºC
Nchetara dị mkpa
1.AASraw na-enye Raw Tadalafil uzuzu (Cialis ntụ ntụ), nke nwere ike'ọtụtụ ụzọ na-emekarị ka achọpụtara gị.
2.AASraw na-enye ntụziaka na nduzi zuru ezu maka mmepụta maka ngwaahịa na-adịghị achọpụta (Cialis ntụ ntụ) Tadalafil ntụ ntụ.
Kedu ihe bụ Tadalafil uzuzu
Tadalafil uzuzu, ihe akwara nke tadalafil, bu uzuzu uzuzu, ana emekarị ka eji mee tadalafil. Tadalafil, ọgwụ a na-akpọ / Cialis, bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara dị ka PDE-5 (ndị na-eme ihe na-emepụta ụdị phosphodiesterase type 5). Mmekọahụ na-eme ka Tadalafil / Cialis na-agbatị ahụ ike nke arịa ọbara na-eme ka ọbara na-asọba n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ. Tadalafil / Cialis na ndị ọzọ inhibitors PDE-5 nwere ike inyere ndị ikom aka na-arụ ọrụ (ED) site n'ịkwalite mmeghachi omume erectile mgbe nwoke na-akpali agụụ mmekọahụ. A na-eji ya agwọ ọrịa na-adịghị mma (nkwarụ) na ihe mgbaàmà nke hypertrophy hypertension (prostate gbasaa). Ndị mmadụ na-azụta tadalafil uzuzu si akwa dị ọcha tadalafil ntụ ntụ soplaya. E wezụga Tadalafil / Cialis, ọgwụ ndị ọzọ dị na klas a bụ Viagra (Sildenafil) na Levitra (Vardenafil), na Flibanserin.
Kedu ka tadalafil si arụ ọrụ
PDE5 bụ enzyme nke achọtara n'ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ site na nrụrụ erectile. Ọ na-egbochi ihe ọzọ dị oké mkpa - cGMP, ma ọ bụ cyclic guanosine monophosphate, nke bụ akụkụ dị oké mkpa n'ime usoro nrụpụta ahụike. Ekele cGMP nrịbama site na nkwụsị akwara na mpaghara pelvic gị na-ebute ntọhapụ nke nitric oxide, nke, ya mere, na-atụgharị ahụ ike dị mma na-ejikọta arịa ọbara n'ime pelvis gị. N'ihi ya, ọbara ọzọ nwere ike isi na ha gafee, na-ejuputa akụkụ cavern na ahụ nke ụbụrụ gị, na-eme ka o sie ike ma jupụta. Mgbe enwere ọtụtụ PDE5 na ezughị cGMP, ahụ gị enweghị ike ịkọwapụta akara ndị na-abịa site na njedebe akwara gị, nke na-arụpụta zuru ezu ma ọ bụ nke enweghị ike inweta ụlọ.
Mgbe ị na-ewere 36-hour Cialis / tadalafil uzuzu, ọ na-ebelata mmetụta nke PDE5 na usoro gị ngwa ngwa, na-eme ka ịta cGMP laghachi na ọkwa nkịtị dị ka mkpirikpi oge 15-45. Otú ọ dị, dịka ọkara nke ndụ Tadalafil dị mkpụmkpụ, mmetụta ya na-aga n'ihu n'oge 2 na-eme ka PDE5 laghachi azụ na ahụike gị - na-aka njọ. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ike Cialis / tadalafil dị arọ kwa ụbọchị, ọ na-enyere aka ịnọgide na-enwe ogo ahụike nke cGMP n'ime ahụ gị, na-enye gị ohere dị anya ị ga-enwe mmasị inwe mmekọahụ ọzọ. Ọ na-ewe oge Cialis 4-5 dị ala iji malite ịrụ ọrụ, ya mere, atụla anya na ị ga-abanye ezigbo azụ mgbe ị natachara mpi mbụ ahụ. Otú ọ dị, akụkụ dị mma bụ na ị gaghị enweta nsogbu ọ bụla n'ihe ndina ọzọ - ọ bụrụhaala na ị na-ewere Cialis / tadalafil kwa ụbọchị.
Otu esi eji tadalafil kpuchie uzo
Raw tadalafil ntụ ntụ na-abịa na ahịa na ụdị tadalafil ọgwụ; capsules, Mgbe ị na-ekpebi ịchọta tadalafil, yuou ga-edozi dose ahụ dịka mkpa gị.
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ụtụtụ tadalafil a tụrụ aro bụ 10 mg kwa ụbọchị, na-ewerekarị 30minutes tupu oge mmemme (tadalafil maka ojiji). Dabere na nzaghachi nke nzaghachi ma ọ bụ mmetụta ndị dị na ya, a pụrụ ịgbatị dose ahụ na 20 mg ma ọ bụ belata na 5 mg n'ụbọchị. Mmetụta nke tadalafil nwere ike ịdịru ruo 36 awa. Ndị ọ bụla na-aṅụ ọgwụ ndị na-eme ka ọkwa ọbara nke tadalafil ghara ibufe ngụkọta nke 10 mg na 72 awa (Lee mmekọrịta ọgwụ ọjọọ). Maka otu ojiji a na-eji kwa ụbọchị n'emeghị ka inwe mmekọahụ bụrụ ihe a tụrụ aro bụ 2.5 ka 5 mg kwa ụbọchị. Tadalafil ekwesịghị iwere ihe karịrị otu ugboro kwa ụbọchị.
Ihe Dị Mkpa: E kwesịghị iji crates na-eme ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na o nwere ike ịmịlata mgbali elu. Ekwesịrị ka ewepụ nitrates maka ọkara ma ọ dịkarịa ala 48 awa tupu iji Cialis jiri ọtụtụ ndị ọrụ nitrate chọrọ izere nke a na PED5 niile.
Ngwa Tadalafil uzuzu maka ire ere
N'ụlọ ahịa ọgwụ, ma ọ bụ na ụlọ ọgwụ, anyị nwere ike ịhụ cialis ngwa ngwa, nke bụ tadalafil. Ee, nke a bụ tadalafil uzuzu - otu n'ime ngwa kachasị eji etinye ọgwụ maka ọgwụgwọ ED, ọ na-abụkarị mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụ mbadamba, na mgbakwunye na nke a, n'eziokwu, tadalafil na-ejikwa n'oge ndị ọzọ, dị ka :
Tadalafil uzuzu maka swiit
Tadalafil nwere ike itinye ya na candies iji mee ka candies nkịtị mee ka mkpa nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ. E nwere ọtụtụ ụdị sweets mmekọahụ na Malaysia, ihe ndị bụ isi bụkarị tadalafil uzuzu, na sildenafil uzuzu.
Tadalafil uzuzu maka Mmekọahụ kọfị
N'ahịa, e nwere ụfọdụ ụdị mmekọahụ kọfị .Mainly Efrata na-abụkarị: Mkpịkasị oyi ara ehi, Honey, Cinnamon, Cacao, Maca.Sex kọfị bụ ụdị oge ọṅụṅụ na Aztec na-agagharị na ya. Okpokoro ahụ dị ntakịrị osere, ma ọ na-atọ ụtọ iji mee ka onye ọ bụla detụ ya ụtọ. Kọfị kọfị a nwere ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka nkwonkwo gị dị mma. Maca, Cacao, Cinnamon, Honey na Coconut Milk na-enyere aka mee ka mmepụta hormone dịkwuo mma, meziwanye mkpụrụ dị mma, igbu oge na-egbu ndị mmadụ, ọbara shuga dị ala, mee ka ahụ dịkwuo mma na imeziwanye mmekọahụ.
Maka anyị, mgbe ụfọdụ iji nwee mmetụta dị ike ma ọ bụ mmetụta na-adịghị ike, anyị nwere ike ime ka kọfị kọfị site n'ịgbakwụnye mmekọahụ na-eme ka ntụsị na-acha uhie uhie, dịka mkpa nke onye ahịa si dị iche iche kaadị kọfị.
Esi zụta Tadalafil uzuzu; zụta Cialis ntụ ntụ si AASraw
Tadalafil (171596-29-5) ntụ ntụ | AASraw tadalafil uzuzu maka ire ere HNMR
11 reviews maka Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
gosiri 2 si 5
Sammy - 05 / 17 / 2019
Ekwenyesiri m ike na post a emetụla ndị ọbịbịa Ịntanet ahụ, ya
n'ezie n'ezie obi ụtọ na edemede na-ewuli ọhụrụ weblog.
Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
gosiri 3 si 5
Arlie - 12 / 10 / 2018
Howdy nke a bụ ụdị nke isiokwu mana m chọrọ
mara ma ọ bụrụ na blọọgụ jiri ndị editọ WYSIWYG ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị ga-eji aka na koodu HTML.
Ana m amalite blog n'oge na-adịghị anya, ma enweghị m ahụmịhe nzuzo ka m chọrọ
nweta nduzi site n'aka onye nwere ahụmahụ. Enyemaka ọ bụla ga-abụ nnukwu
Latia - 12 / 09 / 2018
Enwere m ike ịzụta viagra online?
Columbus - 12 / 09 / 2018
Enwere m ike iji viagra n'enweghị ọgwụ dọkịta?
Laurene - 12 / 08 / 2018
Akụkọ na-akpali akpali n'ebe ahụ. Gịnị mechara? Jisie ike!
Noreen - 11 / 22 / 2018
Ehihie ọma! Amaara m na nke a bụ okwu agbanyeghị ma m na-eche ma ọ bụrụ na ị
maara otú m ga-esi zụrụ tadalafil
Maureen - 11 / 21 / 2018
Ọ bụrụ na ị chọrọ
Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa, ọdịnaya dị na weebụsaịtị a
n'ezie egwu maka ndị mmadụ maara nke ọma tadalafil, nke ọma, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ọma ahụ
Florene - 11 / 19 / 2018
청주 출장 샵
Ana m eji ụbọchị ọkara m gụọ akwụkwọ weebụ gị, enwere m otutu ozi nke tadalafil, ọ bụ ezigbo onye,
ọdịnaya kwa ụbọchị tinyere iko kọfị.
Marylin - 11 / 17 / 2018
Onye na-enyere aka na-eme ihe dị egwu
posts M nwere ike ikwu. Nke a bụ oge mbụ m na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị nke Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ na ntụpọ ndị ọzọ. O juru m anya na nnyocha ị mere iji mee ka nke a bụrụ ihe ịtụnanya.
gosiri 1 si 5
Karry - 11 / 16 / 2018
인천 오피 걸
Ọ bụrụ na ị na-ekere òkè n'asọmpi maka otu n'ime saịtị ndị kachasị n'ịntanetị.
Aga m akwado gị! ị nwere isiokwu kachasị mma, enwere m ekele maka ya 🙂
인천 인천 출장 샵